Ugaadh iyo habardugaag
Forfatters Bokmaskin, Stockholm, 2005
ISBN: 91-9710-698-8 -
Ugaadh iyo habar dugaag waa buug ka hadlaya xayawaanka duurka, gaar ahaan ugaadha iyo dugaagga. Haddaba inta aynaan ugaadha iyo dugaagga u guda galin waa in aan wax yar ka hadalnaa meertada nololeed iyo habka Ilaahay iskugu talo galay noolaha iyo deegaanka. Dhulka quruxdiisu waa nolosha iyo noolaha oo isku xiran, deegaanka nool (dhulka aan weli nabaad guurin ee noolaha kala duwani ku nool yahay) waxa ku nool noolayaal kala duwan oo noocyo badan iskugu jira. Ugaadha iyo dugaaggu waxa ay qayb ka yihiin meertadaa nololeed ee Eebbeheen iskugu talo galay, waana tan quruxda u yeelaysa deegaanka iyo dhulka. Ugaadha oo la odhan karo waa xoolaha kaydka ahi waa qaniimad iyo qurux Ilaahay ugu deeqay dadka.
Qoraagu wuxuu deggan yahay waddanka Sweden.
Waxaanu halkan soo galin doonaa taariikhda qoraha.
Akhriste - 2012-08-24 07:08:11
MAGACEYGU.WAASHUTAALE - EMAIL.AABAHAJACEELKA8@ATHOTMAIL.COM
Qoraaga - 2008-09-23 09:41:01
shaafici buulle - q_oor@hotmail.com
habar dukaakey isu imoow
Akhriste - 2007-10-26 03:32:06
Ikraam Cali-kaar - ikraam.calikaar@gmail.com
Asalaama caleykum! Bacda salaan walaal aad ayaan ula dhacay buuggaasi macluumaadka ku qoran. Hadaba anigoo ah Ikraam Cali-kaar, weriye madax banaan oo degan dalkan Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg, islamarkaasina ah macalin afka hooyo u dhiga ardeyda ayaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo buugaas sideen ku heli karaa si ardeyda aan u wax u dhigo u bartaan xawayaanada duur jooga ah ee dalkeena.? Sidoo kale ma jiraan buuggag kale oo aqoon guud ah iyo taariik iyagana ka hadlaya Somalia iyo dalalka kale ee caalamka? Wixii tallo ah walaal igala soo xirriira e-mail-ka aad ku arki doontaan shaashada. Ikraam
Akhriste - 2007-09-18 12:11:59
mukhtaar aadan batuun - ayatulaah201@hotmail.com
walaal buugani waa buug qiimo badan oo iraali galiyey marka waxaan doonayaa in aan wax ku darsado kuwa danbe Ee aad soo saraysaan alla mahad leh mukhtaar aadan batuun
Akhriste - 2007-09-18 12:10:48
mukhtaar aadan batuun - ayatulaah201
Akhriste - 2007-09-18 12:02:46
fu'aad - yahuu@hotmail.com
walalaay waxaan doonayaa in aad i tilmaamtan halka aan ka helaayo buugan qiimha leh
Akhriste - 2007-02-21 09:52:04
hoodo - hododh@hotmail.com
walaal bogani waa mid aad u fiican waayo wuxuu ka hadlayaa qaniimada uu illahay ina siiyay waana wax lagu mahad naqo looguna shukriyo illaahay nimcadiisa wanaagasan. waanad ku mahad san tihiin